Saika haparitaka eto Antananarivo: vola sandoka 616 600 000 Ar tratra, olona 18 natolotra ny fitsarana | NewsMada
Saika haparitaka eto Antananarivo: vola sandoka 616 600 000 Ar tratra, olona 18 natolotra ny fitsarana
Volabe sandoka mitentina 616 600 000 Ar amin’ny 10 000 Ar teo aloha, sarona, saika haparitaka eto an-dRenivohitra. Sarona ny alahady teo ireo niaraka tamin’ny olona 18. Nisamborina tsikelikely ireo olona ireo. Teny Mahamasina sy Anosy ny nahatrarana azy ireo. Nisy ihany koa ny olona nosamborina tany Itasy. Araka ny voalazan’ny zandary, efa manakaiky ny vola tena izy mihitsy ireo. Arifomba ny fitaovana nampiasain’ireo olon-dratsy. Tratra niaraka tamin’ireo ny fitaovana efa avo lenta, toy ny “imprimante” efa raitra.
“Tamin’ny alalan’ny fanomezan’ny olona vaovao ny nahafantarana ny fisian’ireo vola ireo. Rehefa nandeha ny fanadihadiana, nanomboka tamin’ny asabotsy sy alahady teo. Folo lahy sy vehivavy valo ireo tratra ireo”, hoy ny lehiben’ny vondron-tobim-pileovana Analamanga, ny lietna kolonely Randrianarivelo Annicet.
Natolotra ny fampanoavana, omaly hariva, ireo olona ireo. Voalaza fa efa tambajotra goavana mihitsy ity rava ity, ary mbola misy ny karohina. “Nozarazaraina tamin’ny olona nitangorona teny Anosy sy Mahamasina, ny asabotsy sy alahady, ireo vola ireo”, hoy ny zandary.
Izany hoe, rehefa misy olona mitangorona amin’izao anaty propaganda izao no hizarana ny vola. Tsy nety nilaza kosa anefa ny zandary raha tamin’ny resaka propagandy ny nanaparitahana ireo vola ireo. Nisy ihany koa ny mpiasam-panjakana sy polisy voatonontonona amin’ity raharaha ity, ary anisan’ireo voasambotra, saingy nilaza ny zandary fa ny fitsarana no afaka manambara ny momba azy ireo. Andrasana ny tohin’ny raharam-pitsarana.